Kartoonada ▷ ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Ciyaaraha Kuwa raacaya
April 13, 2019 0 comments 1784
Taxanaha firfircoon ama filimada ayaa si aad ah loogu jecelyahay carruurta, dhallinta iyo xitaa dadka waaweyn. Helitaanka iyaga waxay noqon kartaa mid wax tar leh, gaar ahaan markii aanaan helin waxa TV-ga laga daawan karo. Sidaa darteed, waxaan u keenay liiska aaladaha ugu wanaagsan ee lagu daawado kartoonnada internetka.
Kartoonnada - 5 aaladaha ugufiican ee lagu daawado khadka tooska ah
Ma waxaad dooneysaa inaad mar kale aragto xilli taxane ah oo aad jeceshahay, ama daawato filimkii ugu dambeeyay ee Disney Pixar? Halkan waxaad ka heli doontaa waa maxay aaladaha kuu ogolaan doona inaad sameyso. Marka Nala joog oo soo hel fursadaha Waxaan kuu soo qaadaynaa marka xigta.
1. Netflix - Filimaan iyo taxane animated ah oo khadka tooska ah ka socda
Netflix Waa mid ka mid ah adeegyada Streaming ugu caansan maanta, isagoo jooga dalal ka badan 190. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad daawato filimada, taxanaha iyo kuwa kale, aaladaha ay ka midka yihiin Smart TV, kombiyuutarkaaga, ama moobaylkaaga adigoo adeegsanaya App.
Goobta waxaa ka mid ah a Ikhtiyaar u ah carruurta tusaysa keliya waxa carruurta ka kooban. Intaa waxaa sii dheer, markii aad iska diiwaangelinayso, Netflix waxay ku weydiin doontaa inaad muujiso xiisahaaga ku saabsan noocyada kaladuwan: xiisaha, majaajillada, iwm. Sidaa darteed, iyo sida aad u aragto waxa ku jira, Netflix wuxuu kugula talin doonaa filimada ama taxanaha xiisahaaga.
Mar horeba waad isdiiwaangelisay, waa inaad bixisaa bil kasta, oo laguugu soo dallaci doono bil kasta taariikhda is-qoritaanka asalka ah. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in bisha ugu horeysa ee isdiiwaangalinta ay tahay tijaabo, marka waa bilaash. Dhanka qiimaha, tani waxay ku xirnaan doontaa qorshaha aad dooratay:
Qorshaha aasaasiga ah: wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku soo bandhigto waxa ku jira shaashadda 1 waqti isku mid ah qeexitaanka SD ee caadiga ah. Qiimaha: 7,99 $ bishii.
Qorshaha caadiga ah: Wuxuu kuu oggolaanayaa inaad daawato waxyaabaha HD ka kooban (markii la heli karo) aaladaha 2 isku mar. Qiimaha: 10,99 $ bishii.
Qorshaha lacagta koowaad: wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku daawato waxyaabaha ku jira aaladda 4 hal mar HD ama Ultra HD (markii la heli karo). Qiimaha: 13,99 $ bishii.
Qorshaha DVD: Wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku darto DVD qorshahaaga rukumada ee hadda jira ama aad ku aragto waxa ku jira DVD kaliya. Waxay ansax u tahay Mareykanka oo keliya.
Dhammaan rukumaduhu waxay leeyihiin helitaan isku mid ah oo ah waxa ku jira, taas oo kordhaysa oo aad u badan. Waad arki kartaa dhamaan waxyaabaha aad rabto, iyadoon xad iyo xaddidnayn. Joogso, ciyaar oo dib u daawo mar alla markii aad rabto.
Sida loogu talo galay xawaaraha deg degga ah ee internet-ka lagu soo dejiyo si loo arko waxa ku jira:
Xawaaraha loo baahan yahay: 0,5 Mb / s
Xawaaraha lagu taliyay: 1,5 Mb / s
Xawaaraha lagula taliyay SD: 3 Mb / s
Xawaaraha lagula taliyay HD: 5 Mb / s
Xawaaraha lagula taliyay Ultra HD: 25 Mb / s
Waa in la ogaadaa in haddii waqti kasta oo aad rabto inaad joojiso adeegsiga, aad ku sameyn karto khadka tooska ah kharash la'aan. In kasta oo wakhtiga ugu yar ee sidaas la yeelo ay tahay ka dib hal bil markii la is qoro.
Waxaa muhiim ah in la xuso in lacagta billaha ahi kordhin karto iyada oo ku xidhan cashuurta ay sameeyeen hay'adaha wadankaaga. Kaas oo ay tahay inaad tixgeliso markaad is qoreyso Netflix.
2. Youtube - Kanaallo kala duwan oo bilaash looga daawado kartoonnada khadka tooska ah
Dhamaanteen waan ognahay qalabkan Google, kaas oo aan ku soo dejisan karno oo aan ku daawan karno fiidiyaha bilaashka ah. Waana soo korinay maxaa yeelay Waxaa jira khaddo badan oo kartoonno ah oo ku jira YouTube-ka. Markaa waa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay madaddaalada kuwa yaryar.
Dabcan, waxyaabaha YouTube ka jira way kala duwan yihiin, iyadoo fiidiyowyada qaarkood aan ku habooneynin carruurta aan qaan-gaarin. Dareenkan, madalku wuxuu ina siinayaa ikhtiyaarka ah inaanu ka hor tagno nooca nuxurka. Marka waxaad u oggolaan kartaa carruurtaadu inay maraan goobta adigoon ka baqayn inay arkaan wax aan habooneyn.
Sida haddii taasi aysan ku filneyn, Google Play waxay leedahay codsi la yiraahdo Youtube Carruurta. Tani waxay uruurineysaa dhammaan waxyaabaha carruurta, si ay u fududaato in la helo fiidiyowyada xiisaha leh.
Kanaallada kartoonnada ee aad ka heli karto YouTube, waxaa ka mid ah:
Shirkadda animation Maskaxda duurjoogta ah, waxay leedahay kanaal YouTube ah oo leh inka badan 2.5 milyan oo raacsan. Waa mid ka mid ah kanaalada lagu daawado khariidadaha internetka oo leh taxane kala duwan oo badan. Waxaad ka heli doontaa, sheekooyin iyo jihooyin loogu talo galay carruurta da 'kasta leh.
Ka mid ah taxanaha leh tirada ugu badan ee fiidiyowyada, ayaa ah Shimbirta waalan, xayawaan qare oo qosol leh. Adventuresada waxaa lagu soo koobay qiyaastii 20 daqiiqadood qosol iyo madadaalo. Intaa waxaa sii dheer, waxaad ka heli doontaa cutubyo badan oo ah khadadka YouTube-ka ee taxanahan, kaas oo leh in ka badan macaamiisha 1 milyan.
Taxane kale oo cajiib ah kanaalka kanaalka Duurjoogta ah waa taxanaha Cajiib George. Waxay ka sheekeyneysaa halyeeyga Jorge, daanyeer bunni ah oo aan laheyn dabada, kaas oo laga keenay Afrika. Waxaad sidoo kale ka heli doontaa cutubyadeeda shaashadda rasmiga ah ee taxanaha, oo leh inka badan 2 milyan oo macaamiil ah.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa adventures ee dirxiga jaalaha iyo casaanka ee taxanaha unug ee TUBA Entertaiment. Waxay ka sheekeyneysaa sheekada labo dirqis oo saaxiibtinimo ah, oo ay la socdaan jilayaasha kale, oo ku nool adventures aad u qosol badan. Waxaa loogu talagalay da 'kala duwan oo da' ah, oo ay ku jiraan dadka waaweyn, waxayna leedahay kanaal YouTube ah oo leh inka badan macaamiisha 4 milyan.
Waxaan dhamaanteen aragnay Warner Bros oo taxane ah oo taxane ah, sida Looney Toons. WB Caruurta Waa kanaal YouTube ah oo leh cutubyo taxana ah, oo leh inka badan macaamiisha 4 milyan. Kanaalka waxaad ka heli kartaa maadooyinka Ingiriisiga iyo Isbaanishka iyo waliba luqado kale.
Xaraashka fiidiyowga, the Tooney toons: Qaniinyada Bunny, Lucas Duck, Taz, Wildcat, Tweety, iwm. Kaqaybgalayaal badan, oo carruurta iyo dadka waaweyn ka dhigaya qosol, kartoonadaani waa kuwa caadi ah. Suurtagal ma aha in la daalaan marka la arko adventures-ka nacasnimo ee jilayaashaas.
Hal-abuurka Scooby-Doo iyo baandada, kuwa si caqli gal ah u xalliya kiisaska qarsoon. Si kastaba ha noqotee, qaar badan oo ka mid ah fiidiyowyada taxanahan ma aha cutubyo dhammaystiran. Si kastaba ha noqotee, iyagu waa muuqaallo aad u wanaagsan oo taxanaha ah.
Sidoo kale, sheekooyinka Tom iyo Jerry, taas oo jiirka (Jerry) ay had iyo jeer ku jees jeesaan bisadda (Tom). Taxane ah oo ka dhigaya qoyska oo dhan qosol, iyo caadi ah shaki la'aan.
Waxay ku saabsan tahay wiil la magacaabay Pocoyo, kaas oo ka ogaanaya adduunka ku xeeran asxaabtiisa. Kuwani waa Pato, Elly, Pajaroto iyo Loula, kuwaas oo leh Pocoyo, oo ku nool adduunyo ku yaal 3D oo leh asal cad. Waa taxane habboon oo loogu talagalay barbaarinta carruurta, oo leh waxbarid waxbarasho.
Kanaalka YouTube ee Pocoyo, oo leh inka badan 1,5 Milyan oo macaamiil ah, waad ka heli doontaa taxane buuxa. Cutub kasta wuxuu socdaa ku dhawaad ​​daqiiqado 7. Kaliya gali kanaalka oo dooro cutubka aad rabto inaad daawato.
Peppa Waa doofaar yar oo la nool waalidkeed Hooyo Pig iyo Aabe Pig, iyo walaalkeed ka yar George. In kasta oo ay leeyihiin astaamo humanoid, waxay hayaan astaamo gaar ah oo doofaarro ah, sida cuncunka dabiiciga ah. Marxaladaha waxay ka dhacaan wakhtiga ugu badan guriga qoyska, iyo mararka qaarkood, meelo kale.
Kanaalka rasmiga ah ee YouTube-ka YouTube wuxuu leeyahay in kabadan 6 Milyan oo raacsan. Waxaa ku jira, waad ku arki kartaa adventures Peppa ee Kirismaska, gu'ga, Maalinta Aabaha, iwm. Intaa waxaa sii dheer, kanaalka waxaad ka heli doontaa xilli-ciyaareedkii ugu horreeyay liiska liiska.
Tattoo The Little Witch Tatty
Tatty Waa saaxir yar oo adeegsata sixirkeeda si ay u qabato waxa ay caadiyan ku qaadaneyso waqti iyo dadaal, sida karinta. Isaga iyo bisadiisa Misifu iyo walaashiisa yar ee Lilly, wuxuu ku noolaan doonaa adduunyo meel walba oo ay suuragal tahay. Waxaad arki doontaa Tatty oo duulimaadkeeda ku dul duuleysa, oo waxyaabo u muuqanaysa ama baaba'aya, iyo wixii la mid ah.
Iyada oo ku dhow malaayiin 2,5 macaamiil ah, kanaalka taxanaha ah wuxuu leeyahay cutubyo dhammaystiran. Caadi ahaan muddada uu mid waliba yahay qiyaastii 20 daqiiqo, oo ay ka kooban tahay waxyaabo waxbarasho oo aad u badan. Maaddaama aysan ku salaysnayn laxanka ama heesaha, waxaa lagula talinayaa carruurta ka weyn da'da saddex sano.
Masha iyo Gadhku
Taxanaha wuxuu ku saabsan yahay saaxiibtinimada ka dhaxaysa Masha, gabar aad u firfircoon oo cajiiba, iyo saaxiibkeed orso. Had iyo jeer, Masha ayaa lagu dhex geli doonaa waxyaalo badan oo xiiso leh iyadoo la macaamilaysa adduunkeeda. Markaad sidaa sameyso waxay u baahan doontaa caawinaadda saaxiibkaaga, sida cunugga uga baahan yahay waalidkiis maalin kasta.
Kanaalka uu ku leeyahay YouTube ayaa in ka badan 5,5 milyan oo macmiil ah. Cutub kasta, oo soconaya ugu yaraan 7 daqiiqo, wuxuu carruurta bari doonaa runta aasaasiga ah ee saaxiibtinnimo. Dhinacooda, waaliddiintu sidoo kale waxay baran karaan inay si wanaagsan ula dhaqmaan carruurtooda.
Dino Waa miino yar, tricerátops aad u jecel inuu wax barto. Ciyaaraha iyo madadaalada, la macaamil adduunka, oo si dheeraad ah u faham. Isaga Carruurtu waxay baran karaan midabada, qaababka, tirooyinka, xarfaha iyo wixii la mid ah.
Wax badan oo ka kooban waxaad ka heli doontaa kanaalkeeda rasmiga ah ee YouTube-ka. Cutub kasta wuxuu leeyahay ujeedo waxbarasho, oo carruurta lagu baro fikradaha iyo magacyada cusub. Dhinaceeda, muddada fiidiyow kasta wuu kala duwanaan karaa.
Libaax dhallaanka, eey yar, wuxuu la wadaagaa hal-abuurnimadiisa iyo caadooyinka maalinlaha ah ee dadweynaha qaab heeso ah. Isaga oo ay weheliyaan, carruurtu waxay qaban karaan waxqabadyadooda maalinlaha ah sida hurdada, kicitaanka iyo dugsiga oo ay farxad u aadaan. Waxaa loogu talagalay dhallaanka iyo carruurta ka hooseeya sannadaha 6, in kasta oo fiidiyowyada qaarkood ay ku habboon yihiin carruurta waaweyn.
Marka la isku daro tirada heesaha lagu soo bandhigo kanaalka, waxaad ka heli doontaa Heesaha loogu talagalay: dhaansi, qosol, toosi, hurdo, iwm.. Si aad u seexato, tusaale ahaan, waxaad ka heli doontaa daryeel-bixiyeyaal, heeso ku dejinaya carruurta dhallaanka la seexdo iyo xanjebinta. Kanaalka Nene León ee Isbaanishka ayaa leh in ka badan macaamiisha 90mil.
3. Nickelodeon.es iyo Nickjr.es - Kartoono loogu talagalay carruurta da 'kasta leh
Nickelodeon Waa kanaal Mareykan ah oo loogu talagalay carruurta iyo dhallinyarada, gaar ahaan kuwa u dhexeeya sannadihii 7 iyo 12. Dhinaceeda, Nickjr Waa kanaal ka soo baxay Nickelodeon, oo loogu talagalay dhagaystayaasha dugsiga barbaarinta. Labada kanaal waxay leeyihiin taxane firfircoon, in kastoo Nickelodeon ay sidoo kale soo bandhigto noocyo kale oo barnaamijyo ah.
Khadka internetka ee 'Nickelodeon' waxaad ka heli kartaa ciyaaro aan dhammaad lahayn, fiidiyooyo, tartamo, iwm. Waxaad ku arki doontaa cutubyo dhammaystiran oo taxane ah, iyo sidoo kale jajab ka mid ah. Waxaa ka mid ah taxanaha animation-ka ah ee ay soo bandhigto xariirka:
Spongebob. Magaalada Fondo Bikini, oo ku taal hoosta Badweynta Baasifiga, waxay ku nooshahay isbuunyo dhinaca badda ah oo afar gees ah: Bob. Isaga iyo asxaabtiisa Patricio (xiddigta bada) iyo Arenita (dabayl leh dharka suufka), wuxuu ku nool yahay halyeeyada ugu halista badan.
Post. Waxay ku saabsan tahay qof carrab la 'oo bulshadiisu u qaybsantahay afar quruumood: Hawada, Dhulka, Biyaha iyo Dabka. Dabcan, adduunyada gaajada xoog ayaa waliba jirta, ummadduna waxay isku dayi doontaa inay wax walba baabi'iso. Si kastaba ha noqotee, Aang, Avatar, wuxuu cawaaqib xumo kala kulmi doonaa asxaabtiisa.
Sidoo kale, bogga 'Nickjr portal' waxaad sidoo kale ka heli doontaa ciyaaro iyo fiidiyowyo kartoonada kanaalka ah. Waxaa jira taxaneyaal xiiso badan oo aad ka heli karto halkaas, kuwaas oo kala ah:
Kiva Can! Kiva waa gabar leh mala-awaal duul ah oo aan rumeysneyn wax aan macquul aheyn. Saaxibkeed Saaxil iyo eeygeedu Angus waxay la wadaagi doonaan waayo-aragnimada tagida meelaha cajiibka ah. Waxba kama soo bixi doonaan maskaxda Kiva, wax walba ayaa dhici kara, haddii aad rumeysan tahay.
Dora Explorer. Iyada oo leh toddobo sano jir ah, Dora iyada iyo saaxiibkeed daayeerka Boots, waxay sahamiyaan adduunka ku xeeran. Weydiinta daawadayaashaada caawimaad, waxay raadin doonaan walxaha ama meelaha, waxayna xalliyaan dhibaatooyinka. Dareenkan, Khariidadda, oo waliba ah dabeecad kale, ayaa door muhiim ah ciyaari doonta.
Max iyo Ruby. Waxay ku saabsan tahay adventures of Max, bakayle ee 3 sano, iyo walaashiis Ruby ee 7 sano. Ninka dambe ayaa had iyo jeer daryeela walaalkiis ka yar. Ciyaarta waxaad ku noolaan doontaa khibrado xiiso leh.
4. Wuaki - Adeegga Daaweynta Beddelka ah ee Netflix
Waa a adeegga bixinta ama gudbinta, oo leh taxane iyo filimaan aad ku daawan karto khadka tooska ah. Waxa kujira dhammaan qoyska, Wuaki Waxay ku habboon tahay madadaalo dadka waaweyn, dhalinyarada iyo carruurta. Sidaa darteed, barnaamijkan waxaad ku daawan doontaa kartoonno, filimaan firfircoon, iyo sidoo kale noocyo kale oo filim ah.
Waxaa la aasaasay 2010 magaalada Barcelona, ​​waxaana hadda laga heli karaa Spain iyo dalal kale. Sannadkii 2012 waxaa la wareegtay shirkadda Japan laga leeyahay ee Rakuten, oo ku takhasustay Khadadka kala duwan ee ganacsiga marka lagu daro baahinta.
Waxaa jira laba dariiqo oo ay macaamiisha u isticmaali karaan waxyaabaha ka muuqda websaydhkan:
Waxaad bixinaysaa waxaad aragto oo keliya. Waxay ka kooban tahay bixinta iibsashada ama kireysiga waxyaabaha aad rabto inaad aragto, markaa uma baahn doontid inaad baajiso lacag bixinta bil kasta. Tani waxay ka dhigeysaa Wuaki mid kale oo loogu talagalay aaladaha sida Netflix ama HBO.
Aflaanta kirada ah waa la keydin doonaa saacadaha 48 ee adiga ku jira maktabada fiidiyowga, meel bannaan oo aad marin uga heli doontid shaashaddaada. Sidoo kale, iibsiyada aad samayso waxay ku sii jiri doonaan ilaa saddex sano maktabadaada fiidiyowga. Intaa waxaa sii dheer, waad sii iibsan kartaa qaar ka mid ah filimada wali ku jira tiyaatarada.
Dhanka kale, iibsashada filimada ayaa noqon kara mid sareeya. Iyadoo aan loo eegin caannimadiisa ama weynaanteeda, qiimaheedu wuxuu noqon karaa qiyaastii 7,99 iyo € 16,99. Sidoo kale, maskaxda ku hay in taxanaha aan la kireysan karin, oo aad ku iibsan karto kaliya xilli xilliyeed.
Xulashada Wuaki. Waa a diiwaangelinta ayaa bixisa kaas oo kuu oggolaanaya inaad u hesho xulasho ka kooban nuxurka madal. Waad heli kartaa liistadan markasta oo aad rabto iyo intaad rabto. Dhamaantiin kaliya € 6,99 bishii.
Kaliya filimada iyo taxanaha leh sumadda "Xulashada" ayaa laga heli karaa qaabkan. Hadda, haddii aad xiisaynayso filim aan lahayn sumadda Xulashada, waa inaad kiraysaa. Si kastaba ha noqotee, maskaxda ku hay in taxanaha inta badan laga heli karo rukumadan, iyo sidoo kale filimmada qaarkood.
Waad iska qorikartaa websaydhka Wuaki, ama waxaad ka heli kartaa shirkad isgaarsiineed oo adeegga siisa. Xulashadaan ugu dambeysa badanaa way ka jaban tahay.
Dhanka kale, waxaad ka daawan kartaa oo keliya waxyaabaha ku jira khadka tooska ah, kiis ahaanna ma soo dejin kartid. Dareenkan, waxaa lagu talinayaa inaad lahaato xiriir ugu yaraan 3Mb si aad u aragto waxa ku jira tayada SD caadiga ah. In kasta oo aad rabto inaad daawato filimada ama taxanaha HD, xawaaraha waa inuu ahaadaa ugu yaraan 5Mb.
5. ADNstream - kartoonno onlayn ah oo bilaash ah
ADNstream Waa goob aad ku raaxeysan karto waxyaabo badan oo ka kooban: taxane, filimmo, kanaallo mawduucyo, iwm. Waxaa jira a qaybta gaarka ah ee carruurta, marka waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku daawato kartoonada internetka. Waxaa lagu heli karaa aalado aad u tiro badan sida SmartTV, kumbuyuutarkaaga, iwm.
Gaaritaanka waxyaabaha ku jira ayaa gabi ahaanba bilaash ah, Thanks to xayeysiinta ay boggu faa'ido leedahay. Si ka duwan adeegyada sida Netflix, oo lacag bille ah ku dallaca dhammaan isticmaaleyaasheeda. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad daawato waxyaabaha qaddarka leh, waa inaad kireysato ama aad iska diiwaangelisaa mid ka mid ah qorshayaasha ADNstream.
In kasta oo diiwaangelintu ay bilaash tahay, waad kahelikartaa waxyaabaha ad diiwangashanayn In bogga. Laakiin haddii aad isdiiwaangaliso, waxaad heli doontaa fursado badan oo dheeri ah, sida keydinta fiidiyowyada aad jeceshahay, kahadlaysa, iyo kuwa kale. Dhinaca kale, waad tirtiri kartaa koontadaada markasta oo aad rabto adigoon wax ballanqaad ah lahayn.
Haddii aad dooratid rukummada la bixiyay, waxaa lagu dallaci doonaa muddadda aad dooratay. Adiga ayay kugu xigi doontaa haddii aad joojiso xaddiga isqorista semester kasta, rubuc kasta ama bil kasta. Sidoo kale waad iska bixin kartaa rukhsad wakhti kasta.
Waxaa muhiim ah in la sheego in qaar ka mid ah waxyaabaha ku jira ay ku yaalliin oo keliya kirada. Isku mid, markii la kiraysto, ayaa adiga gacanta kuu geli doona saacadaha 24. Had iyo jeer waad la xiriiri kartaa kooxda ADNstream haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo xagga aragtida ah.
Kahor kiraysiga, waa inaad hubisaa haddii qalabkaaga iyo xiriirkaaga internetku ay buuxiyeen shuruudaha lagama maarmaanka ah. Tusaale ahaan, kombiyuutarada, madalku wuxuu kugula talinayaa inaad isticmaasho daalacashada:
Google Chrome (v. 21.0 ama wixii ka dambeeya)
Moxilla Firefox (v. 15.0.1 ama wixii ka dambeeya)
Microsoft Internet Explorer (v. 9.0 ama wixii ka dambeeya)
Waa inaad sidoo kale tixgelisaa baaxadda isku xirka internetkaaga:
1Mb - qeexitaanka caadiga ah ee SD
1,5 Mb - Qeexitaan Sare HD
Sidoo kale waa lagama maarmaan inaad haysato nooca ugu dambeeyay ee Adobe Flash Player oo lagu rakibay kombuyutarkaaga. Waxaas oo dhami waxay kuu ballan qaadayaan waayo-aragnimo aad u wanaagsan markaad gasho barxada si aad ugu daawato kartoonada internetka. Nidaamyada waxaa lagu fuliyaa Paypal, laakiin sidoo kale waa suurtogal in lagu sameeyo kaarkaaga deynta.
Ka dib markaad aqriso wax ku saabsan dhammaan adeegyadan ama aaladaha si ka daawo khariidadaha internetka, waad ogaan doontaa inay iyagu yihiin beddel weyn. Qof kastaa wuxuu asal u leeyahay filimada firfircoon iyo / ama taxanaha reerka oo dhan. Marka Xulo midka adiga kugu habboon oo ku raaxeyso.
1 Kartoonnada - 5 aaladaha ugufiican ee lagu daawado khadka tooska ah
2 1. Netflix - Filimaan iyo taxane animated ah oo khadka tooska ah ka socda
3 2. Youtube - Kanaallo kala duwan oo bilaash looga daawado kartoonnada khadka tooska ah
3.2 WB Caruurta
3.4 Peppa Doofaar
3.5 Tattoo The Little Witch Tatty
3.6 Masha iyo Gadhku
3.7 Baro Dino
3.8 Libaax dhallaanka
4 3. Nickelodeon.es iyo Nickjr.es - Kartoono loogu talagalay carruurta da 'kasta leh
5 4. Wuaki - Adeegga Daaweynta Beddelka ah ee Netflix
6 5. ADNstream - kartoonno onlayn ah oo bilaash ah